Iindaba-Uhlalutyo lweMveliso-icala labathengi
1. Iimfuno zomgangatho womoya wokusetyenziswa kwesilinda: Ucoceko olomileyo nolomileyo lomoya kufuneka lusetyenziswe.Moya awuzukuqulatha ioyile yesinyibilikisi yendalo, ityuwa, irhasi etshabalalisayo, njl.njl., ukuthintela isilinda, isenzo esibi sevali Ngaphambi kokufakwa, umbhobho wokudibanisa kufuneka ubethwe ngokupheleleyo kwaye uhlanjwe , musa ukuzisa uthuli, i-chip, ukutywina iibhegi kunye nokunye ukungcola kwisilinda, ivalve.
2. Iimfuneko zokusetyenziswa kwesilinda: Kwiindawo ezinothuli oluninzi, amathontsi amanzi kunye namaconsi eoyile, icala lentonga kufuneka lixhotyiswe ngesigqubuthelo sokukhusela i-telescopic. kwaye iqondo lobushushu eliphakathi lidlula -10 ~ 60 ℃ ngeswitshi semagnethi, amanyathelo okulwa ukubanda okanye ubushushu kufuneka athathwe.Kwimeko yamandla amakhulu e-magnetic, isilinda esinezixhobo ezizenzekelayo zentsimi enamandla kufuneka ikhethwe. akufuneki isetyenziswe kwimiphunga edlayo okanye kwimiphunga ebhobhoza ngesangqa setywina.
3. ukuthambisa ajikeleze iisilinda:Iisilinda ezi-oyile-ioyile kufuneka zixhotyiswe ngesixhobo se-oyile esine-flow efanelekileyo.Isilinda ayithanjiswanga ngeoyile. Ingasetyenziselwa ixesha elide kuba igrisi yongezwa kwangaphambili kwisilinda.Le silinda inokusetyenziselwa ioyile, kodwa xa ioyile inikezelwe, ioyile akufuneki imiswe. Ioyile kufuneka inikezwe nge-turbine no. 1 (ISO VG32). Sukusebenzisa ioyile, ioyile yokusonta, njl.
Umthwalo wesilinda: Intonga yepiston ihlala ikwazi ukuxhasa kuphela umthwalo we-axial.Avoid ukufaka imithwalo esecaleni kunye ne-eccentric kwimithambo yepiston. Xa kukho umthwalo ojikelezayo, intonga yepiston kwisixhobo sesikhokelo kufuneka yongezwe, okanye ukhethe isilinda sentonga yesikhokelo, njl njl. umthwalo wokutshintsha utshintsho, ipiston yentonga yangaphambili kunye nomthwalo * sebenzisa indibaniselwano edadayo Ngale ndlela, akusayi kubakho sikhewu nakweyiphi na indawo yohambo. Xa isilinda iphantsi kwamandla amakhulu, itafile yofakelo lwesilinda iya kuba amanyathelo okuthintela looseness, deformation kunye nomonakalo.
5. Ukufakwa kwesilinda: Xa ufaka isilinda esisisigxina, i-axis yomthwalo kunye ne-piston rod kufuneka ifane.Xa ufaka icici okanye iisilinda zemithambo, qinisekisa ukuba inqwelomoya ejikelezayo yesilinda kunye nokujikeleza komthwalo zikwindiza enye.
Uhlengahlengiso olukhawulezayo lwesilinda: Xa isantya esilawulayo sisetyenziselwa ukulungelelanisa isantya sesilinda, ivalve yayo yokufaka umcephe kufuneka ivulwe ngokuthe ngcembe kwimeko evaliweyo kwaye ilungelelaniswe kwisantya esifunwayo.Lungisa inani lokujika ukuze ungadluli * kwinani lokujika. inkosi yokutshixa.
7. Isinqandi sesilinda: Xa amandla ashukumayo esilinda engenakufunxwa ngokupheleleyo yisilinda uqobo, isixhobo se-buffer (esifana ne-hydraulic buffer) okanye i-buffer loop kufuneka songezwe ngaphandle.
Ngokumalunga nokusebenza okuzenzekelayo kwesilinda:Isixhobo sokusebenza esizenzekelayo, amanyathelo okuzithathela kufuneka athathwe kumatshini okanye kwisekethe ukukhusela ukwakheka komzimba kunye nokonakala kwesixhobo ngenxa yokusebenza okungachanekanga kunye nomjikelo wesenzo sesilinda. Umgangatho wenqanaba: Ukusuka kuphononongo lweempawu zesilinda ezibalekayo, Kunzima ukumisela owona mveliso yesilinda yamandla. Ke kufundo lwentsebenzo kunye nemveliso yesilinda, isilinda isetyenziselwa umxholo wento yokulayisha. Isilinda umthwalo we-beta uchazwa njenge-beta = isilinda ithiyori kunye namandla okuphuma komthwalo F * 100% isilinda Ft (l3-5), eyona silinda yomthwalo imiselwe yimeko yokusebenza, ukuba iqinisekisiwe ityl isilinda ichazwa ithiyori yesilinda yegesi inokumiselwa, amandla emveliso, anokubala ukubola kwesilinda. Xa umthwalo impedance, ezifana isilinda esetyenziswa nokubotshwa womoya, ukulayisha akuvelisi inertia force, jikelele khetha umthwalo factor beta ngu 0.8; Kuba inertial umthwalo, ezifana isilinda esetyenziselwa ukutyhalela workpiece, umthwalo uya kuvelisa inertial amandla, umthwalo Ixabiso lexabiso limi ngolu hlobo lulandelayo: <0.65 xa isilinda sihamba ngesantya esisezantsi, V <100 mm / s; <0.5 Xa isilinda sihamba ngesantya esiphakathi, V = 100 ~ 500mm /s; <0.35 xa isilinda isantya esiphakamileyo , v> 500 mm / s. Indima yokutshintsha kwemagnethi ye-SMC: Iswitshi yamagnetic switch isetyenziselwa ukulawula ukuhamba koomatshini abasebenza kwimizi-mveliso, uhlengahlengiso kumyinge we-1: 1 ukuya kwi-1: 150; Ubungakanani bebonke bufanelekile ukuhlangana kwindawo encinci, ishafti yedrive kunye ne-shaft drive shaft zezi yenziwe ngentsimbi engenasici, igiya kunye nokuqhuba i-bushing yenziwe ngezinto zokuthambisa ze-thermoplastic ngokuzenzekelayo, zonke iintlobo zezinto kunye nezinto zinokumelana kakuhle, kwaye izixhobo zinokungenwa kwamanzi kunye nothuli.Ukutshintsha kwemagnethi ubukhulu becala kusetyenziswa ukulawula isenzo oomatshini abasebenza kwimizi-mveliso, njengokuphakamisa, njl njl. Umlinganiso wotshintsho ukusuka ku-1: 1 kuye ku-1: 9,400; Ukufakwa kumda oqhelekileyo kufakwe ii-2, 3, 4, 6, 8, 10 okanye 12 zokutshintsha ngokukhawuleza okanye okucothayo kunye ne-CAM PRSL7140PI ebukhali. Amanye amacandelo kunye nemilinganiselo yenguqulelo iyafumaneka xa uceliwe.Yenza iiodolo ezikhethekileyo. * Umlinganiso wohlaziyo ngu-1: 9,400 Zonke izinto kunye namalungu amelana nokubola, amanzi nothuli.